पीसीसी क्रिकेट कपको उपाधि आयोजकलाई – Kaski News
पोखरा, २७ माघ । आयोजक पोखरा क्रिकेट क्लब (पिसिसी) ले दि युनाइटेड गोल्डमार्ट पिसीसी अन्तर क्लब क्रिकेट कप २०७४ को उपाधि जितेको छ । पोखरा रंगशालाको क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको फाईनलमा आयोजक टोलीले पोखराकै राइजिङ क्रिकेट एकेडेमीलाई ९९ रनको फराकिलो स्कोरले पराजित गर्दै उपाधि उचालेको हो । उपाधिसँगै विजेता टीमले नगद ४० हजार तथा उपविजेता राइजिङ एकेडेमीले २० हजार नगद साथमा शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे ।
विजेता तथा उत्कृष्ट खेलाडीलाई प्रमुख अतिथि नेपाल ओलम्पिक कमिटिका सदस्य तेजबहादुर गुरुङ, नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पूर्व उपाध्यक्ष तथा कास्की संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. वीरेन्द्रसिंह गुरुङ , क्यानका केन्द्रिय सदस्य ऋषिराम गौतम, मुख्य प्रायोजक दि युनाइटेड गोल्डमार्ट प्रालिका अध्यक्ष प्रितममान बुद्धाचार्य, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रशिक्षण विभाग प्रमुख विद्या मर्सानी, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्की अध्यक्ष केशव पाठक, बास्केटबल संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जुमप्रसाद गुरुङ, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पोखरा वडा नं. ३ अध्यक्ष रविन्द्रबहादुर प्रजु, क्लबका अध्यक्ष निकेश श्रेष्ठ लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । आठ टीम सहभागी प्रतियोगितामा १० वर्षदेखि ४० वर्ष उमेरसम्मका स्थानीय खेलाडीको सहभागिता थियो । यसमध्ये राष्ट्रिय यू–१६ तथा यू–१९ टोलीका सदस्य समेत थिए ।
क्लबका अध्यक्ष निकेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको समापन कार्यक्रममा क्रिकेट मैदान निर्माण समिति संयोजक समेत रहेका प्रा.डा. वीरेन्द्र सिंह गुरुङ, संघका केन्द्रिय सदस्य ऋषिराम गौतम, कास्की संघका उपाध्यक्ष विनित श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए ।